Unity in diversity of Muslims of Myanmar | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« အေကာက္ ၀န္မင္းၾကီးေက်ာင္းတုိက္ ေက်ာင္းဒကာ အေကာက္၀န္ မင္း မြလႅာအီဘရာဟင္ မိသားစု
M-Media: သာသနာေရးဝန္ၾကီးဦးဆန္းဆင့္အစၥလာမ္ေကာင္စီရုံုးသို႔လာေရာက္ျခင္း »
Unity in diversity of Muslims of Myanmar
1. Myanmar Muslims must understand and accept that we need to be in various fields of Socio-political struggles: e.g. in NLD, NGOs, in Parliament, in the government (National or local level), Private and Joint Venture business, USDP, Various Religious or Islamic organizations whether Islamic Council, Ulama, Tabaligue, 8888, ABSDF, Different other religious groups or even different rebel groups. (Even in military/police if possible).2. We should avoid attacking other different sects’ religious activities, which is their personal affairs.
3. Different sects of Muslims must be united and work together in Socio-political reasons (Education or Welfare activities or health aid or NGO works etc. Different religious practices are personal affairs to practice individually, in the houses, in the families, in the respective mosques etc.
4. We need to AGREE to disagree in Intra Islam affairs.
5. We need to deal together, join our hands to face the non-Muslim and Gov assault. Not to fight back but by peaceful resistences. (But those who really wish to rebel, they should be allowed ON THEIR OWN RISK. But majority should better stay clear from violent means).
6. We should open the door of communication oraHOT LINE with ALL the Islamic organizations, NLD, Monks (who understand and want peace) and the present gov, local authorities, police USDP etc. to “REQUEST” some activities during emergencies like this time.
7. We should act as the glue, bond, or coordinator, between the Myanmar Islamic groups which are hostile to each other.
We distribute the information to them, we gather information, strategies etc. Like this common problem… We all need to understand and accept that we all are doing for Socio-political improvement of all the Muslims in Myanmar.
FB of my friend Ko ဇင္ ဘိုေအာင္
ၾကိဳက္တဲ႔လမ္းက ၾကိဳက္သလိုေမာင္း ပန္းတုိင္ တူေနဖို႕ဘဲ လိုတယ္ ။ ဒီအေတြးအေခၚေလးကို ယေန႕ေခတ္ ျမန္မာျပည္တြင္းက မြတ္စလင္ညီေနာင္ေတြကို လက္ေတြ႕ က်င္႔သံုးသေဘာေပါက္ေစျခင္လိုက္တာဗ်ာ… ရင္ထဲက ဆႏၵပါ ………. အႏုနည္းနဲ႔ သြားတဲ႔ သူကလည္း သြား ……… ၾကမ္းျခင္တဲ႔သူကလည္းၾကမ္း ……….. interfaith dialogue ေတြလုပ္တဲ႔သူကလည္းလုပ္ …….. online မွာ အေျခတင္ေျဖရွင္းတဲ႔သူကလည္း ေျဖရွင္း …….. မီဒီယာကို အာရံုစိုက္လုပ္မယ္႔သူကလည္း လုပ္ ……… ႏိုင္ငံေ၇းပါတီ ဖဲြ႕မယ္႔သူကလည္းဖဲြ႕………. NGO ဘဲလုပ္မယ္ဆိုသူကလည္းလုပ္… အမ်ားအျမင္ဘယ္လိုကဲြပါေစ ေနာက္ကြယ္မွာ က်ေနာ္တို႕အားလံုးရဲ႕ ပန္းတိုင္ကို တစ္ခုတည္း target ထားတယ္ဆိုတာ အားလံုး မညိွဘဲ ညီေနရင္ သိပ္ေကာင္းမယ္လို႕ စိတ္ကူးယဥ္ၾကည္႔မိတယ္ဗ်ာ…
TQ Bravo.That is the way….Unity in diversity isaconcept of “unity without uniformity and diversity without fragmentation”  that shifts focus from unity based onamere tolerance of physical, cultural, linguistic, social, religious, political, ideological and/or psychological differences towardsamore complex unity based on an understanding that difference enriches human interactions. The concept of unity in diversity was used “in non-Western cultures such as indigenous peoples in North America and Taoist societies in 400-500 B.C. In premodern Western culture it has been implicit in the organic conceptions of the universe that have been manifest since the ancient Greek and Roman civilizations through medieval Europe and into the Romantic era.”http://en.wikipedia.org/wiki/Unity_in_diversity
‘ေၾကာင္ကို ဘယ္သူ ခ်ဴဆြဲေပးမလဲ?” တဲ့။
( ဆရာ ေမာင္သာရ လို႕ထင္တယ္ )
ဒါက ေၾကာင္ကိုေၾကာက္ရတဲ့ ႂကြက္ေတြရဲ့အေနအထားကိုေပၚလြင္ေစတယ္။
၁၉၈၀ တစ္ဝိုက္မွာ ဆရာ ဂုဏ္ထူးဦးသိန္းႏိုင္ရဲ့ စကားတစ္ခြန္း ေပၚလာတယ္။
” ႏြားပလာတာေကြၽးသလို ” တဲ့။
ဒါက အက်ိဳးမရွိတဲ့ ကိစၥကို အပင္ပမ္းခံလုပ္ေနရတဲ့အေနအထားကို တင့္စားလိုက္တာ။
က်ေနာ္တို႕ ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္ေတြ အေနအထားက အဲ့ဒီ ၂ ခုလုံးနဲ႕ လုံးဝ လုံးဝ ကြာျခားပါတယ္။
ဗားကရာ ကုန္းတက္မွာ ( သက္သက္မဲ့ ) ဒီဇယ္ဆီမျဖည့္ထားလို႕ စက္မႏိုးတဲ့ လမ္းၾကိတ္စက္ကို
ေနာက္ကေန လူတစ္စုက မညီမညာ တြန္းေနသလိုပဲ၊
ဂီယာကျဖဳတ္ထား ( ဖရီး ႐ိုက္ထား ) ေတာ့ လႊတ္လိုက္ရင္လည္း ကိုယ့္ေပၚျပန္ လိမ့္ဆင္းလာမယ္၊
ဆက္တြန္းရေအာင္ကလည္း လံုေလာက္တဲ့အင္အားမရွိ၊ လူမညီ၊
ေတာင့္ထားတာၾကာလာျပီး မတတ္ႏိုင္လို႕ လႊတ္ေပးလိုက္ရင္ မေရွာင္ႏိုင္သူ မသာေပၚ၊
ေရွာင္ႏိုင္တဲ့လူလည္း မေပ်ာ္ေလနဲ႕ ဖယိုဖရဲ အကြဲအျပဲ အလဲ ပဲ။
ကိုယ့္ရဲ့ လမ္းေလ်ာက္ရမဲ့ အကာအကြယ္ ျဖစ္တဲ့ ဖိနပ္ျပတ္ရင္ျပတ္၊ ေပ်ာက္ရင္ေပ်ာက္၊
ကိုယ့္အရွက္ကို ကာကြယ္မဲ့ ပုဆိုးကြၽတ္ရင္ကြၽတ္၊ မကြၽတ္ရင္ ျပဲ ပဲ။
ကိုရန္ႏိုင္ ၁၉၇၉ ရန္ကုန္ဝိဇၨာသိပၸံ ကာတြန္းျပပြဲမွာဆြဲခဲ့တဲ့ကာတြန္းေလး တစ္ကြက္လို
၁ ဂဏန္းကို ဝိုင္းၾကည့္ေနတဲ့လူ ေလး ေယာက္မွာ
ပထမတစ္ေယာက္က ”၁” တဲ့၊
ေနာက္တစ္ေယာက္က ”င” တဲ့၊
ေနာက္တစ္ေယာက္က ”ပ” တဲ့၊
ေနာက္တစ္ေယာက္က ”ဂ” တဲ့ ဗ်ား။
(ဆရာဂ်ာဝတ္သန္း Javed Ansari ထုတ္ေဝတဲ့ မဂၢဇင္းတစ္ခုထဲမွာ
အဲ့ဒီလူေလးေယာက္ကို ဝတ္စံုေတြေျပာင္းျပီး ေရးေပးဖူးေသးတယ္ဗ်။)
အဲ့ဒီ အကၡရာ သို႕မဟုတ္ ဂဏန္း ကို
ဘာေၾကာင့္( ဘယ္အေျခအေနေၾကာင့္) ေရးခဲ့လဲ? Why?
ဘယ္တုန္းကေရးခဲ့လဲ ? When?
ဆိုတဲ့ စဥ္းစားဆင္ခ်င္ ေတြးေခၚ ေမွ်ာ္ျမင္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းအား နည္းသြားျပီဗ်။
က်ေနာ့ ေယာကၡမ ၾကီး ေျပာဖူးတဲ့ စကားတစ္ခြန္းရွိတယ္
” ဟဲ့ နင့္နားရြက္ က်ီးခ်ီသြားျပီေျပာရင္
ကိုယ့္နားရြက္ ရွိေသး၏ မရွိေသး၏ ျပန္စမ္းၾကည့္ပါလားကြယ္၊
ဘယ့္ႏွယ္ ေဒါသတၾကီး က်ီး ကိုလိုက္ေမာင္းေနရတုန္း ” တဲ့။
PLEASE READ MY COMMENT WITH A HUMOUR>>>
”ေၾကာင္ကို ဘယ္သူ ခ်ဴဆြဲေပးမလဲ?” Don’t worry brother, we all are doing this successfully. U Wira Thu, Aye Mg, Racist Rakhines, Bigot Monks, Radical Hard liners from USDP, Military and Government and undemocratic hypocrites from NLD already got bells on their neck. The whole world could see and hear them.
” ႏြားပလာတာေကြၽးသလို ”…The duty of Muslims is to resist the religious oppression and to educate or even invite those non-believers. It is our duty to feed them, if these Bigot non-believers refused to eat Plata, just mixed with grass or hey or Hnan Phat or by product after extracting the sesame seeds.
လမ္းၾကိတ္စက္..Big Gyan Done Khu.
“လူမညီ၊” ၁ ဂဏန္းကို ဝိုင္းၾကည့္ေနတဲ့လူ ေလး ေယာက္မွာ… We all must agree to disagree in some agreeable way.
ေမာတယ္။ Listen to Sai Hti Sai’s song, “Bicycle”.
Tags: Buddhism, Burma, Islam, Muslim, Myanmar, Religion and Spirituality, Rohingya people, Thein Sein
This entry was posted on February 27, 2013 at 11:52 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “Unity in diversity of Muslims of Myanmar”
August 19, 2021 at 6:09 am | Reply
မြန်မာမှာ ကျွန်တော် စာနာမိတဲ့ အုပ်စုတွေထဲက တစ်မျိုးက မွတ်စလင်လစ်ဘရယ် (အစစ်တွေ၊ တနည်းအားဖြင့် နှစ်နှစ်ကာကာ လစ်ဘရယ်ဖြစ်သူ မွတ်စလင်တွေ၊ နောက်ပြီးတော့ နှစ်နှစ်ကာကာ လက်ဝဲဖြစ်တဲ့ မွတ်စလင်တွေ။ လစ်ဘရယ်အရေခြုံ၊ လက်ဝဲအရေခြံု ပြီး မဘသ ဆန်နေတဲ့ မွတ်စလင်တွေ မပါ။
တစ်ခုခု ချွန်ထွက် သို့မဟုတ် ကလန်လိုက်တာနဲ့ မွတ်စလင်အသိုင်းအဝိုင်းကြီးက သူတို့ကို စ ပယ်ရော။ ပယ်ရုံဆိုတော်ဦးမယ်။ အွန်လိုင်းမှာ တိုက်ခိုက်တာတွေပါရှိ။ အဲလိုပဲ လူများစုအသိုင်းအဝိုင်းကြီးကလည်း တန်းတူဆက်ဆံတယ်လို့ သူတို့ကိုယ်တိုင် ထင်ပေမဲ့ တခါတခါမှာ မသိမသာ ခွဲခြားတာတွေ၊ ပယ်ထားတာတွေက ရှိပါတယ်။ မွတ်စလင်တွေကို တန်းတူပဲ ဆက်ဆံတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လောက် အကျင့်ကောင်း သဘောကောင်း အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ မွတ်စလင်ဖြစ်ဖြ်င ငါ့နှမနဲ့တော့ မပေးစားနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့။ တခါတလေဆို ရေးကြတာတွေ့သေးတယ်။ မင်းလို မွတ်စလင်တွေချည်းဆို ငါတို့က လက်ခံပါတယ်ဆိုတာမျိုး ရေးကြတာ။ အကုန်နီးပါးမကောင်းဘူး၊ မင်းကတော့ ငါတို့အကြိုက်နေရင် လက်ခံမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုး။ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စလိုမျိုးမှာ (အဖိနှိပ်ခံတွေဖြစ်ကြောင်း အသိသာကြီးမှာ) မွတ်စလင် တစ်ယောက်ယောက်ဟာ ဖိနှိပ်ခံရသူဘက်က ဝင်ပြောဖို့ ခက်တယ်။ သူတို့က ကျူးကျော်သူတွေပါ၊ ငါတို့ ပြည်တွင်းနေတွေနဲ ့မတူဘူးဆိုတာမျိုး ပြောကြမှ မန့်တဲ့သူတွေက အေး…မင်းလို မွတ်စလင်မျိုးတွေချည်းဆို ငြိမ်းချမ်းမှာ ဘာညာမျိုးနဲ့ အထက်စီးနဲ့ မန့်ကြတာမျိုးတွေ တွေ့ဖူးပါံ့။ ဒါကြောင့် ကိုမြအေးတို့က အစ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ကျူးကျော်သူလို ပြောခဲ့ကြတာ။ ပြည်မဆိုတာက မွတ်စလင်တွေ မနာဖို့အရေး ရိုဟင်ဂျာတွေကို ချနင်းတာမျိုးပေါ့။ သူ အစကတည်းက ရိုဟင်ဂျာဟာ အဖိနှိပ်ခံဖြစ်ကြောင်း ပြောကြည့်ခဲ့ပါလား။ သူ့သမီး ဝေနှင်းပွင့်သုန်လို တပြည်လုံးက ဝိုင်းကင်တာ ခံရမှာပေါ့။
နောက်တချက်က အဲလိုဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာ မွတ်စလင်အများစုကလည်း double standard ဖြစ်တာကြောင့်လည်း ပါတယ်။ ကိုယ့်ထိမှာ နာကြတာ။ အဲ့ကျ တကယ့် မွတ်စလင် လစ်ဘရယ်၊ တစ်ဘက်မှာ တကယ့် မွတ်စလင် လက်ဝဲတွေဟာ principle အရ ပြောလည်း အများနဲ့ ရောကြိတ်ခံရတာပေါ့။ လက်တွေ့မှာကလည်း စည်းမျဉ်းခံယူချက်အရ ပြောသူထက် ဘာသာတူလို့ ဝင်ပြောသူက ပိုများနေတာကိုး။ အရေးအကြောင်းကျ သိသာသွားတယ်လေ။ ဒီတော့ လစ်ဘရ္ဖြစ်သူ သို့မဟုတ် လက်ဝဲဖြစ်သူ မွတ်စလင်တွေကို တခြားမွတ်စလင်တွေကလည်းမုန်း၊ ဗမာတွေဘက်ကလည်း မုန်းပြီး အများနဲ့ရောကြိတ်လို့ ရသွားတာပေါ့။ ဘရားသား ဟုတယ် အထင်ခံရတာပေါ့။ အဲဒါကိုမှ ဆက်ပြောရဲတယ် ဆိုရင်တော့ နျစ်ဘက်လုံးကို ဆန့်ကျင်ရဲတဲ့သူမို့ လက်ဝဲဖြစ်ဖြစ်၊ လစ်ဘရယ်ဖြစ်ဖြစ် အဲလိုပြောရဲတဲ့ မွတ်စလင်တွေကို စည်းမျဥ◌်းခံယူချက်အရ ပြောတာို ချီးကျူးတယ်။
ကိုယ်တို့လို ဘာသာမဲ့တွေကတော့ ဘာသာမှန်သမျှ ပယ်ပြီးသားမို့ လူတွေက ကိုယ့်ဆီက ဘာသာရေးအမြင်တွေ ဘာသာရေးဓလေ့တွေ ကိုယ့်ဆီက မမျှော်လင့်ထားတာမို့ သိပ်ဂရုစိုက်စရာမလို။ ခုနောက်ပိုင်း ဗုဒ္ဓဘာသာတချို့အစိတ်အပိုင်း၊ ခရစ်ယာန် အစိတ်အပိုင်းတချို့နဲ့ တာအို နဲ့ ဆူဖီသဘောတရားတချို့ ကြိုက်လာတာတောင် ဘာသာရှိအဖြစ် မခံယူဘူး။ ဘာသာမဲ့အဖြစ် လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲ ခံယူတယ်။
ဒါပေမဲ့ စစ်ဘက်ကလွဲရင် ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း ရေရှည်ရန်သူလို ကိုယ်က သဘောမထားဘဲ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံတော့ ပယ်ခံရတယ်ဆိုတာ ခုနောက်ပိုင်း သိပ်တော့မရှိဘူး။ အစပိုင်းကတော့ မြန်မာ့အွန်ိလုင်းရပ်ဝန်းမှာ ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှု အားကောင်းစဥ◌်ကတော့ ကိုယ်တွေလည်း ဘယ်လွတ်မလဲ။ ကင်ခံရတာပေါ့။ မွတ်စလင်တွေ ကိုယ့်ကို ဝိုင်းကင်တာလည်း ရှိတာပဲ။ ဘာမှ စော်ကားတာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ သာမန်ဝေဖန်ရုံလောက်ကို ကင်ခံရတာ။ ခရစ်ယာန်တွေ ဝိုင်းကင်တာမျိုးတော့ မခံရဖူးဘူး။
အပြင်လောကမှာတော့ ကိုယ်က စကားမပြော၊ သိပ်မငြင်းဘဲ သဘောကောင်းတဲ့အပြင် ကိုယ့်အမျိုးတွေနဲ့ ကိုယ့်မိတ်ဆွေတွေက ဘာသာစုံ လူမျိုးစုံအပြင် အဲလိုကိစ္စတွေမှာ အသိအမြင် ရှိပြိးသားသူတွေပဲ များတော့ အေးဆေးပဲ။ သတ္တိသိပ်မလိုဘူး။ ဒါပေမဲ့ အွန်လိုင်းမှာတော့ 2014 လောက်အထိတော့ ကိုယ်လည်း သတ္တိမွေးပြီး ရေးခဲ့ရပါတယ်။